ရသဆောင်းပါးစုံ | MoeMaKa Burmese News & Media | Page 160
အိမ်-အပြန်လမ်း ဘုန်းသျှံ (လန်ဒန်ဝိဟာရ) ဇန်န၀ါရီ ၂၅၊ ၂၀၁၃ … အမေရဲ့ မျက်နှာသွင်နဲ့ တစ်ကိုယ်လုံး ဇရာတရားတွေက အလိပ်လိပ် အထပ်ထပ် ဖုံးထားကြပေမဲ့ ပြုံးပြီးတော့ ကြည့်နေတဲ့ မျက်နှာသွင်နဲ့ အမေရဲ့ တစ်ကိုယ်လုံးမှာ မေတ္တာတွေ ဂရုဏာတွေ မုဒိတာတွေ ဥပေက္ခာတွေက အပြည့်ဖုံးထားတာ၊ သားတွေ့လိုက်ရတယ် အမေ … မြန်မာနိုင်ငံ မပြန်ဖြစ်တာ နှစ်တွေ တော်တော်ကြာလို့ ရှစ်နှစ်တာထဲ ရောက်ခဲ့ပါပြီ၊ မိတ်ဆွေများ အရှိုအရှို ပြန်နေကြပေမဲ့ ပြန်လိုတဲ့စိတ်က တွန်းအားအဖြစ် မပေးခဲ့လေဘူး။ ဒီနှစ်တော့ အသက်ရှစ်ဆယ်ကျော်လို့ လေးနှစ်တာ စွန်းလေပြီဖြစ်တဲ့ မွေးမေမေကို “မယ်တော်ကြီး”လို့ မခေါ်ခဲ့ရတာလဲကြာ၊ မယ်တော်ကြီး၏ ရွှေမျက်နှာကိုလဲ မြင်လိုလှတဲ့စိတ်က ပြင်းပြင်းထန် တွန်းအားအဖြစ် ရောက်ရှိလာခဲ့ပါတယ်။ နောက်တစ်ချက်က မွေးရာဇာတိမြေမှာ...
ပြေ (ဆေး-၂) ဇန်န၀ါရီ ၂၃၊ ၂၀၁၃ (၁) ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ရက်က တီဗွီညပိုင်း ၈ နာရီသတင်းအပြီးမှာ ကိုးရီးယားဇာတ်လမ်းတွဲကြည့်မလို့စောင့်နေလိုက်တာ ဟော စာတန်းမထိုး ဘာမထိုးနဲ့ကြော်ငြာထင်လို့ကြည့်နေမိတာ။ မြ၀တီက မြန်မာဇာတ်လမ်းတပုဒ်ဖြစ်နေ တယ်။ မြန်မာဇာတ်လမ်းတွေမကြည့်တာလည်း ကြာပြီမို့ဘာ ပါလိမ့်ဆိုပြီးဆက်ကြည့်နေမိတာ အလိုလေး ဗီလိန်မင်းသား အကယ်ဒမီအောင်ခိုင့်ကားကိုးဗျ။ ကိုယ်တို့ငယ်ငယ်က ဗီလိန်ဆို အေးကြူ ပေါ့။ သူမို့ ပိတ်ကားပေါ်မှာ မပေါ်လိုက်နဲ့ ရုံထဲမှာ ၀ိုင်းဆဲလိုက်ကြတာ။ ကြာကူလီ ၀င်းမြင့်။ နောက် ဦးကျောက်လုံး။ မေမေနဲ့ ဓါတ်ရှင်ကြည့် ပလားဆို ဦးကျောက်လုံးရုပ်ပေါ်လာတာနဲ့ မေမေက တဖျစ်တောက်တောက်လုပ်ရော။ ဟော ဦးကျောက်လုံးလည်း နောက်ဆုံးခံရရော မေမေက ကဲမှတ်မှတ်လို့ ၀မ်းသာအားရပြောတတ်တယ်။ ဒီဘက်ခေတ်ကျတော့ အံ့ကျော်။ သူလည်း မစားသာပါဘူး။ ဒါပေမယ့် ကိုအံ့...
ဖိုးထက် ဇန်န၀ါရီ ၂၂၊ ၂၀၁၃ တမြန်မနေ့က စင်္ကာပူမှာရှိတဲ့ ရသအလင်းက စီစဉ်တဲ့ “လွတ်လပ်ခြင်းရဲ့ ရသ” ဆိုတဲ့ စာပေဟောပြောပွဲကို ကျွန်တော် သွားဖြစ်ခဲ့တယ်။ ဟောပြောမယ့် သူတွေကတော့ ဆရာကြီး ဦးဝင်းဖေ၊ ကိုမင်းကိုနိုင်နဲ့ ကိုဂျင်မီတို့ လို့ ကြေငြာထားတာ တွေ့ကတည်းက ကျွန်တော့်မှာ ဖင်တကြွကြွနဲ့ စိတ်ဇောတွေ စောနေမိခဲ့တယ်။ နီးစပ် ရင်းနှီးရာ သူငယ်ချင်း မိတ်ဆွေတွေကို သွားကြဖို့ လိုက်ပြီး ဆော်သြောနေမိခဲ့တယ်။ တစ်ချို့ကလဲ ကျွန်တော် မပြောခင်ကတည်းက အဆင်သင့် ဖြစ်နေကြပြီ။ တစ်ချိုကလဲ ဟုတ်လား။ သွားရမှာပေါ့ဟု တုံ့ပြန်ကြသည်။ ဘော်ဒါကြီး တစ်ချို့ကတော့ စိမ်းကားရက်စက်လွန်းလှသည်။ “အသက်ငါးဆယ်ကျော် နေပြီကွာ။ ဒါကြီးကို ကျောင်းသား၊ ကျောင်းသားနဲ့ လုပ်စားနေတဲ့ လူတွေပြောတာ ငါက...
အရှင်ဇ၀န (ကုန်းဇောင်း) ဇန်န၀ါရီ ၂၁၊ ၂၀၁၃ မြန်မာမှန်ရင်တော့ မြန်မာပြည်ကြီး ကောင်းစားဘို့အတွက်၊ မြန်မာပြည်ကြီး သာယာချမ်းမြေ့ဘို့အတွက် တတ်နိုင်တဲ့ဘက်က လုပ်ဆောင်နေကြတဲ့သူချည်းလို့ပဲ ယုံကြည်ပါတယ်။ တစ်နည်းအားဖြင့် ဆိုရင်တော့ မြန်မာ ပြည်သူပြည်သားအားလုံး ငြိမ်းငြိမ်းချမ်းချမ်း သာသာယာယာဖြစ်ဖို့ အမျိုးဘာသာ သာသနာတော်ကြီး အဓွန့် ရှည်ကြာခိုင်မာနေဖို့ တတ်နိုင်သလောက် ပေးဆပ်နေကြသူတွေပဲလို့ ခိုင်ခိုင်မာမာ ယုံကြည်နေမိတယ်။ ဒါပေမဲ့ ကိုယ့်တိုင်းပြည်နဲ့လူမျိုး အတွက်၊ အမျိုးဘာသာ သာသနာအတွက် တတ်နိုင်သလောက်လုပ်နေ ကြသူတွေအချင်းချင်း အကောင်းမြင်တဲ့စိတ်ကလေး မထားနိုင်ကြတာကများတယ်။ ဟိုအဖွဲ့ကလုပ်နေတာ အောင်မြင်နေရင် ဒီအဖွဲ့ကလုပ်တာ မကြိုက်ကြဘူး။ ဒီအဖွဲ့ကလုပ်နေတာကိုလည်း ဟိုအဖွဲ့က ကြံဖန်ပြီး အပြစ် ရှာကြ ဝေဖန်နေကြတာတွေကလည်း အများကြီးပဲ။ ဒီအဖွဲ့ ဟိုအဖွဲ့တစ်ခုတည်းမှာကိုပဲ ဟိုလူလုပ်တာကို ဒီလူကမကြိုက်၊ ဒီလူလုပ်တာကို ဟိုလူကမကြိုက်...
မြတ်သောခေတ် ဒီဇင်ဘာ ၁၆၊ ၂၀၁၃ မြတ်သောခေတ် ရေးသားသည့် ဤ၀တ္ထုတိုမှာ ပြီးခဲ့သည့်လထုတ် ရွှေအမြုတေ မဂ္ဂဇင်းတွင် ပါရှိခဲ့သော ၀တ္ထုတို ဖြစ်သည်။ဤ၀တ္ထုတိုနှင့် ပတ်သက်ပြီး အလင်းတန်းဂျာနယ်တွင် ဝေဖန်သုံးသပ်ချက်ဆောင်းပါးတပုဒ်ကို တွေ့ရသည်။ ဝေဖန်သုံးသပ်ချက် စာမျက်နှာ ၁ စာမျက်နှာ ၂ ————————————————————- ရှေ့တည့်တည့်ရှိ မော်နီတာကို ငေးစိုက်၍ ကြည့် နေသော ရောဘတ် စိတ်တို့ ဂနာ မငြိမ် ဖြစ်နေ၏။ ချောမော လှပ၍ စွဲမက်ဖွယ် ခန္ဓာကိုယ် အချိုးအဆစ် နှင့် သူ မတူအောင် လှချင်တိုင်း လှနေသော မိန်းမပျိုလေးတစ်ဦးကလည်း မော်နီတာ ဖန်သားပြင်က တစ်ဆင့် ရောဘတ်ကို ခပ်တွေတွေ ပြန်ကြည့်နေသယောင် ထင်ရသည်။ ထိုမိန်းမပျိုကား တခြား မဟုတ်။ No...
အရှင်ဇဝန (ကုန်းဇောင်း) ဇန်န၀ါရီ ၁၇၊ ၂၀၁၃ မြန်မာစကားပုံတွင် မိုးလွန်မှ ထွန်ချ၊ သူခိုးပြေးမှ ထိုးကွင်းထ၊ လူမိုက်နောက်မှ အကြံရဆိုသော စကား များရှိပါသည်။ အရာရာတိုင်းတွင် အသိနောက်ကျ ပူပန်နေကြသော သူများကို အသိပေးသော စကားပင်ဖြစ်ပါ သည်။ ပုထုဇဉ်တိုင်းမှာ အမှားအယွင်းတစ်စုံတရာ ရှိတတ်ပါသည်။ သို့သော် အမှားတစ်စုံတစ်ရာသည် ပြင်၍ရ သောအမှားရှိသလို ပြင်၍မရသော အမှားများလည်း ရှိတတ်ပါသည်။ အကယ်၍ ပြင်၍မရသော အမှားဖြစ်ခဲ့ လျှင် နောင်တတစ်ဖန် ပူပန်ရတတ်၏။ နောင်တဆိုသောတရားကို လူတိုင်းက အကောင်းဘက်ကချည်း တွေးထင်ယူဆနေကြပါသည်။ နောင် တ မရသေးဘူးလား? နောင်တရဖို့ အချိန်တန်ပြီ-ဟု ပြောဆိုတတ်ကြပါသည်။ နောင်တဆိုသော စကား၏ အဓိပ္ပါယ်ကိုက နောင်မှ တ, ရသည့် အဓိပ္ပါယ်မျိုးဖြစ်နေပါ၏။...
ဂျပန်ခေတ်က မဟဝှါ ဘိုဘိုလန်းစင်၊ ဇန်န၀ါရီ ၁၁၊ ၂၀၁၃ မဟဝှါကို ဂျပန့်ခေတ် လွတ်လပ်ရေးရစက ဗုန်းကျင်းထဲ မွေးခဲ့သည်။ လူတွေဟာ မြေကြွက်တွေလိုပဲ ကျင်းထဲကကို မတက်ရဘူးဟု သူ့အမေကြီးမသေခင်က ပြောလေ့ရှိသည်။ ရန်ကုန် နေပြည်တော်မှာ လွတ်လပ်ရေးပွဲခံချိန်တွင် တောနယ်ကျေးလက်က လူများ ပလိပ်ပြေး ဓမြပြေး ဗုံးပြေးပြေးနေရသဖြင့် လွတ်လပ်ရေးဆိုဒါ သိမှသိကြပါစ။ ခေတ်ဆိုးကြီးမှာ အစစ ရှားပါးရသည့်အထဲ ဂျပန်က ကားသိမ်း ပစ္စည်းသိမ်း သမီးဆွဲ အိမ်သိမ်းတွေရန်က လွတ်အောင်ရှောင်ရတာက ပိုခက်သေးသည်။ မဟဝှါ အဖေကြီး မနေနိုင်မထိုင်နိုင် ရေဒီယိုဖွက်ထားတာကို ကလိတာ လူသိမှဖြင့် ကင်ပေတိုင်လက်မရောက်ပါလား။ ဒီကြားထဲ လေနတ်သားတဲ့ သတင်းစာတွေ လေယာဉ်ပေါ်က ကြဲတာ ခိုးဖတ်ရ၊ မဟာမိတ်ပြန်အလာ မျှော်ကြရ။ ရှိသည့် ဗမာတပ်ကလဲ ဂျပန်တပ်အောက်မှာ...
မောင်စံ (သီတဂူ) ဇန်န၀ါရီ ၁၁၊ ၂၀၁၃ ဒီနေ့ သံချောင်း ကျောင်းမသွား၊ သူငယ်ချင်းများနှင့် လယ်ထဲတွင်ပုစွန်လုံးသွားနှိုက်သည်။ ကျောင်းပြေးချင်၍တော့မဟုတ်၊ ဦးကြီးမြ အိမ်မှာ ရောက်နေတုန်း ဟင်းကောင်းကောင်းဖြင့် ထမင်း ကျွေးချင်သည်။ မနေ့က ထမင်းဝိုင်းမှာ အမေမျက်ရည်ဝဲနေတာ သံချောင်းသတိထားမိသည်။ ဆင်းရဲလွန်းလို့ ဧည့်သည်အစ်ကိုအရင်းကိုတောင် သားလေး ငါးလေး ဝယ်ချက်မကျွေးနိုင်သည့်အတွက် စိတ်မကောင်း ဖြစ်နေပုံရသည်။ ဒီနေ့တော့ အမေပြုံးနိုင်ပေတော့မည်။ အမေပျော်လျှင် သံချောင်းလည်းပျော်သည်။ အမေ့ကို သံချောင်းချစ်သည်လေ။ သံချောင်းသည် ကျောင်းလွယ်အိတ်ကို စလွယ်သိုင်းလျက် ပုဆိုးတိုတိုဝတ်ကာ ပုစွန်တွင်းများ ကို တစ်တွင်းပြီး တစ်တွင်းနှိုက်သည်။ တစ်ကိုယ်လုံးရွှံ့များပေကျံပြီး ပုစွန်လုံးညှပ်သဖြင့် လက်တွင် ဒဏ်ရာများလည်း ဗရပွဖြစ်နေသည်။ သို့သော် သံချောင်းပျော်သည်။ ရသမျှပုစွန်လုံးများကို တက်မ ချိုး၊ ဗိုက်မှာစိုက်ပြီး ခါးပုံစထဲ...
မောင်လူဝေး ဇန်န၀ါရီ ၈၊ ၂၀၁၃ နှစ်ဆယ့်တနှစ်တာ မလေးရှားမှာ နှင့် မြန်မာအလုပ်သမားများဘ၀အကြောင်း အပိုင်း ( ၃ ) နိဂုံးပိုင်းလေးကို ပြီးခဲ့တဲ့ အပါတ်က. 2.1.2013 ..နေ့ ညနေက ရေးမလို့ကွန်ပြူတာအစုတ်ကလေးရှေ့မှာထိုင်ပြီး စဉ်းစားနေဆဲ……ဗြုန်း ကနဲဆို.. ဖုံးဝင်လာတယ်၊ ..အကိုရေ … အောင် ကျော်တယောက် အော်ပတာစီ..(မလေးအခေါ်) အင်္ဂလိပ်လိုတော့ အော်ပရေးရှင်းပါ။..” ရဲ “ ဖမ်းသွားပြီဆိုတော့ .. လူက တော်တော် ခေါင်းကြီးသွားတယ်၊ ဒါနဲ့ ဒီဆောင်းပါးအပိုင်း (၃) ကို မရေးသေးပဲ အဖမ်းခံရတဲ့ကျနော့်သူငယ်ချင်းလည်းဖြစ်တဲ့အောင်ကျော်ကိစ္စကို လိုက်ပေးရတော့မယ်၊ဒါနဲ့ ကျနော်တို့ညဖက်ထိုင်နေကျစားသောက်ဆိုင်မှာစုပြီး သူငယ်ချင်းလေးဦးစုပြီးတိုင်ပင်တယ်၊ ကျနော်ရယ်၊ မမြင့်မြင့်လွင်ရယ်၊ ကိုမျိုးမင်းခိုင်ရယ်၊ ကိုသိန်းကျော်နိုင်ရယ်ပေါ့၊ ကျနော်က အောင်ကျော် ပါမစ်သက်တမ်းတိုးတဲ့အေးဂျင့်ဆီကိုသွား ပေါ့၊ မေးပေ့ါ၊...
Page 160 of 179«1...158159160161162...179»
ကိုသန်းလွင် ● အိန္ဒိယနှင့် ဒီမိုကရေစီ https://t.co/woPoLum73P https://t.co/zP0ilc009k about 27 minutes ago ReplyRetweetFavorite